जानि राखौं ! नूनको ११ आश्चर्यजनक फाइदा – NewsAgro.com
जानि राखौं ! नूनको ११ आश्चर्यजनक फाइदा
July 30, 2017 newsagro जानि राखौं, नून, नूनको ११ आश्चर्यजनक फाइदा
यो समाचार 1925 पटक पढिएको
नूनलाई हाम्रो भान्साका लागि अति आवश्यक वस्तु हो । नून राखिएको छैन भने तपाईं आफूलाई मन पर्ने परिकार पनि खान रुचाउनु हुन्न । नूनले शताब्दीऔंदेखि हाम्रो परिकारलाई साथ दिइरहेको छ । नूनको साधारण काम खानामा स्वाद ल्याउनु हो । तर तपाईंलाई थाहा छ ? नूनले हाम्रो सुन्दरता बढाउन पनि सक्छ । घर सफा गर्न कहिल्यै नूनको प्रयोग गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने नूनलाई तपाईं यस्ता धेरै काममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । नूनका यिनै आश्चर्यजनक फाइदाका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ :
प्याजको गन्ध हटाउन
तपाईंले प्याज वा लसुन काट्नुभयो भने यसको गन्ध हातमा छिट्टै बस्छ । यसलाई हटाउने उपाय एकदम सरल छ । शुरूमा आफ्नो हातलाई भिजाउनुहोस् । भिजाएको हातमा नून लगाएर एकआपसमा रगड्नुहोस् । त्यसपछि हात धुनुहोस् । यसो गर्दा लसुन, प्याजलगायतको गन्ध सजिलै हटाउन सकिन्छ ।
नून पानीलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसले डण्डिफोरलाई छिट्टै हटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । जुत्ताबाट आउने गन्ध हटाउन जुत्ताबाट आउने गन्धले धेरैपटक लाजमर्दो बनाइदिन्छ । त्यस्तो गन्ध हटाउन आफ्नो जुत्तामा नून भरिएको थैली राख्नुहोस् या जुत्तामा थोरै नून छर्कनुहोस् । २ घण्टाको बीचमा नै तपाईं जुत्ताको गन्ध हटेको थाहा पाउनुहुनेछ ।
घरमा बनेको पेण्ट्स प्रयोग गर्नुहोस्
एक कप पीठोलाई एक कप नूनपानीमा मिसाउनुहोस् । यसमा खान मिल्ने रङको केही थोपा पनि मिसाउनुहोस् । अब घरमै पेण्ट्स तयार भयो ।
काटेको फलफूल ताजा राख्न
नूनको सबैभन्दा राम्रो प्रयोग काटेको फलफूल ताजा बनाउन गर्न सकिन्छ । काटेको फलमाथि थोरै नून छर्कनुहोस् । यसले लामो समयसम्म ताजा राख्छ ।
प्राकृतिक रूम फ्रेशनर
आधा कप नून लिनुहोस् र त्यसमा गुलाबको फूलका पत्र वा ३० थोपा तेल राख्नुहोस् । यसलाई अझै प्राकृतिक बनाउन यस मिश्रणमा आधा पाकेको सुन्तला राख्नुहोस् ।
चमकदार सिङ्क बनाउन
आफ्नो सिङ्कलाई चमकदार बनाउन महँगो क्लिनरको प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी छैन । कागतीको रस र नूनलाई मिसाएर पेष्ट बनाउनुहोस् र यसले सिङ्कको सफाइ गर्नुहोस् ।
जब तपाईं धेरै चिल्लो राखेर फ्राई खाना बनाउनुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा यदि आगो निस्कियो भने त्यसमा नून राख्नुपर्छ । नूनले आगो फैलन दिँदैन ।
आफ्नो पुरानो आइरनको तल्लो भागमा खिया लाग्नुका साथै फोहोर भएको छ भने काठ वा ब्राउन पेपरमा नून छर्केर त्यसमाथि तातो आइरन चलाउनुपर्छ ।
तामाका सामग्री चम्किलो बनाउन
तपाईंका तामाका भाँडालाई चमकदार बनाउन नून, भेनेगर तथा पीठोको मिश्रणले सफा गर्नुहोस् । यसले भाँडालाई सफाका साथै चम्किलो बनाउँछ ।
लामखुट्टेको टोकाइबाट राहत
आफ्नो औंलामा थोरै पानी लगाएर चिसो बनाउनुहोस् । त्यसपछि औंलामा नून लगाउनुहोस् । तपाईंलाई लामखुट्टेले जहाँ टोकेको छ, त्यसमाथि विस्तारै लगाउनुहोस् । यसले छिट्टै आराम मिल्नेछ ।
मैनबत्ती पग्लनबाट रोक्न
आफ्नो रात्रिकालीन समयमा मैनबत्तीलाई छिटो पग्लिन नदिन नूनको प्रयोग गर्नुहोस् । यसका लागि मैनबत्तीलाई नूनको गाढा घोलमा धेरै घण्टासम्म राख्नुहोस् । प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यसलाई राम्रोसँग सुकाउनुपर्छ ।
← यस्तो छ, बर्दियामा बाघको अवस्था
रामपुरको कृषि क्याम्पस अब कालिका नगरपालिकामा →
मकैको साटो तेजपत्ता रोप्दै किसान
उचित मूल्य नपाएको भन्दै राजधानीमा किसान आन्दोलित